WinToFlash [Bootable USB dala isiqulathi-zifayili] Ekhaya
WinToFlash ngu anamandla usetyenziso bootable USB kwendalo kunye izigidi uvuma abasebenzisi zonke jikelele iglobhu
Kunye WinToFlash uyakwazi ukwenza Multiboot bootable USB drive nge-Windows Ucwangciso, live linux, kwi-intanethi antivirus, i-data imali, hardware iimvavanyo okanye nkqu sebenzisa ngokupheleleyo lwempahla ethengiswa Windows njenge-Windows Ukuya kwi-USB kwi nje ezimbalwa lwe mouse!
WinToFlash yenza umsebenzi hassle free kuwe
Faka Iifestile a bootable USB nakweliphi na isixhobo
WinToFlash unako ukwenza bootable USB nayo nayiphi na bale mihla Windows Desktop kwaye Umncedisi usapho Ucwangciso. Nayiphi na iintlelo zingasetyenziswa - ukususela XP-10, Ekhaya Ultimate, 32 okanye i-64 bits.
Auto-fumana ISO kuba Multiboot bootable USB
WinToFlash downloads-software ye-Multiboot bootable USB ukusuka kwi-Intanethi kwaye cache ngayo kwi-hard drive, iifomati i-USB, ifaka bootloader, yenza qala ukhetho menu kwaye iqinisekisa inkqubo yefayili ye-iimpazamo kuwe ngokupheleleyo ngokuzenzekelayo.
Multiboot bootable USB ndalo
Indlela malunga 5 kwezahlukeneyo Iiwindow iinguqulelo, live linux, kwi-intanethi antivirus kwaye imali kuphila CD kwi-kanye bootable USB drive? Hayi ingxaki kwaphela! Ngoku uyakwazi ukwenza Multiboot bootable USB ne UNLIMITED inani bootable imiba kwindlela yakho USB drive. WinToFlash ixhasa ekudalweni Multiboot bootable USB drives nayo nayiphi na i-Windows kwi-Windows Vista kwi-Windows 10.
Enye indlela esebenzayo isisombululo ukuba unikezelo Iifestile zakho ucwangciso iifayili a bootable USB drive. Novicorp WinToFlash sele ekubeni ngokwenza nje ukuba ukususela ngo-2009, kwaye nangona kukho uphuhliso stalling ngexesha elithile, nje rush ka-enkulu entsha iyamkhulula kuthetha impahla kukuba ekugqibeleni ngaphandle eyesibini.
WinToFlash, xa kwakhona kancinci ekunene jikelele kwimiphetho:, ikhona ukwenza imizekelo Windows kakhulu lula. WinToFlash iqala i wizard ukuba uza uncedo tsala phezu imixholo ye-windows ufakelo CD kwaye prep i-USB drive babe a bootable septemba kuba i-CD.
Kukho i-software ngokuba WinToFlash ukuba ingaba yonke into ngokuzenzekelayo. Zonke kufuneka senze ngu-sebenzisa inkqubo, umisela indawo-Windows 7 ufakelo cd kwaye kuyo yakho USB ngokukhawuleza drive.
Sebenzisa ngokupheleleyo lwempahla ethengiswa Iifestile a bootable USB
WinToFlash kakhulu anamandla Windows Ukuya dala isiqulathi-zifayili evumela ukuba ufake kwaye iqhube ngokupheleleyo lwempahla ethengiswa Windows yokusebenza kwi-external bootable USB ngokukhawuleza okanye i-hard drive.
UEFI ukuyiqala apha
Ukuba ufuna owakhe entsha PC kunye bale mihla UEFI endaweni BIOS, WinToFlash uza yenza Bootable USB nazo zonke iifayile kufuneka qala kunye UEFI.
WinToFlash kusenokuba portable
Fumana Portable, unzip, qala wintoflash.exe. Akukho installers. Khuphela ngayo yakho "yezixhobo", lubaluleke khona.
Kuba iqhosha kuba omnye Bootable USB-app?
Get WinToFlash Elinolwazi kuba Free!